Nanambara ny antsipiriany voalohany amin'ny Samsung Galaxy Note 8 | Vaovao momba ny gadget
Nanambara ny antsipiriany voalohany amin'ny Samsung Galaxy Note 8
Jose Alfocea | | Finday
Raha tamin'ny taon-dasa dia naniry ny hanavao ny fanamarihana taloha ianao, amin'ity taona ity sisa no miandry dia satria nanamafy fa ny orinasa koreana tatsimo Samsung hanangana Galaxy Note 8 vaovao ary efa miasa amina azy amin'ny fahafaha-miasa tanteraka izy izao, efa naseho taminay ny pitsopitsony vaovao momba ny terminal manaraka.
Ny fampahalalana dia tonga amintsika avy amin'ilay "leaker" fanta-daza Evan Blass izay nanararaotra ilay mpandahateny mahay izay ny mombamomba azy tao amin'ny Twitter mba hanambarana amin'ny fomba tsy ara-potoana izay Ny Galaxy Note 8 an'ny Samsung dia ho tonga somary any aoriana, amin'ny volana septambra, ary amin'ny vidiny iray alina eo ho eo. Fa mitonia!, Araka ilay nolazain'ilay iray hoe, "aza mandeha mbola misy mbola misy."
1 Ny hitsambikina amin'ny Galaxy Note 8
2 Ny zavatra fantatsika momba ny Galaxy Note 8 manaraka
Ny hitsambikina amin'ny Galaxy Note 8
Tamin'ny taon-dasa, nanapa-kevitra ny hitsambikina laharana olympika ny goavam-be teknolojia Samsung tamin'ny alàlan'ny fandefasana azy tamin'ny tapaky ny fahavaratra ny Galaxy Note 7. Ary toa tsy maintsy nahazo momentum be loatra tamin'io fitsambikinana io izy nanan-tantara ara-tantara ny tsy fahombiazana.
Fotoana fohy taorian'ny nanombohany tany amin'ny firenena toa an'i Etazonia sy Korea Atsimo, ny tanindrazany, nanomboka nitory olon-tsy fantatra ireo mpampiasa sasany. tranga fipoahana sy afo mirehitra izay namela ny vavahady tototry ny lelafo, namorona singa marobe, ary indraindray, nisy fiantraikany tamin'ny fananana hafa aza: fiara, trano ... Nitombo ny tranga ary nambaran'ny orinasa ny fampiatoana sy fanesorana ireo terminal, izay hosoloina ho an'ireo vaovao ary tsy misy olana. Voalaza sy vita fa, efa fantatra fa tsy tsara ny fihazakazahana ary amin'ny fandefasana faharoa dia nitohy ny olana. Niasa ny manampahefana ary noraràna tamin'ny sidina ara-barotra aza ny Galaxy Note 7 noho ny loza mety hitranga amin'ny filaminam-bahoaka. Farany, Samsung dia voatery nampiato ny fanamboarana sy ny marketing fanindroany, ankehitriny, maharitra.
Ny Samsung Galaxy Note 7 dia maty, fa tsy ny andiany Galaxy Note. Amin'ny lafiny iray, tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia voamarina fa Samsung dia handefa singa "nohavaozina" an'ny Galaxy Note 7 any amin'ny firenena toa an'i Korea Atsimo amin'ny vidiny ambany manodidina ny 25%, zavatra iray, raha ny fanazavana, efa hitranga. Roa ny tanjona: hitondra ny anjara birikiny amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana amin'ny famoahana ireo singa nitahiry nefa tsy tena fantatra izay hatao amin'izy ireo, ary hamerenana ny ampahany amin'ny fampiasam-bola natao tao amin'ilay terminal tsy nahomby.
Ary avy any an-toeran-kafa, Samsung dia nanomboka niasa tamin'ny mpandimby voajanahary ny terminal "explosive", ny Galaxy Note 8,Fantatsika izao ny antsipiriany fanampiny sasany noho ny filtration nataon'i Evan Blass tamin'ny alàlan'ny piraofilina Twitter @evleaks.
Ny zavatra fantatsika momba ny Galaxy Note 8 manaraka
Satria efa maro ny mpampiasa no mieritreritra, ny Galaxy Note 8 manaraka dia handova ny sasany amin'ireo fiasa izay efa hitantsika amin'ny fahombiazana Galaxy S8 sy Galaxy S8 Plus. Ny zavatra manaitra indrindra dia ny fananganana an'ity foto-kevitry ny efijery "Infinity Display" ity, izay tsara tontonana AMOLED miolakolaka indroa amin'ny sisiny izay mety manana habe 6,3 santimetatra ary 18,5: 9 ny tahan'ny.
Na izany aza, ny Galaxy Note 8 dia ho, toy ny teo aloha, ny terminal misy ny mombamomba azy ary noho izany, na eo aza ny fitoviana amin'ny S8 sy S8 Plus, hiezaka ihany koa ny hanalavitra azy ireo amin'izy ireo, ary tsy amin'ny fampidirana ilay efa malaza S Pen, fa amin'ny alàlan'ny famaritana toy ny a fakan-tsary roa misy sonors 12 megapixel ary fanamafisana optika. Eo akaikin'izy ireo no hisy ny tselatra sy ny ankavanan'ny, ny sensor sensor an'ny dian-tànana. Io no fomba hampitsaharana ny "resabe" ateraky ny toerana misy ny mpamaky rantsan-tanana amin'ny andiany S8.
Ao anatiny, dia hahita fantsona tena matanjaka misy fampisehoana tena tsara isika noho izy hampiditra azy ireo Qualcomm Snapdragon 835 na mpikirakira Exynos 8895 (miankina amin'ny tsena misy antsika), na izany aza Ny fitadidiana RAM dia hampitomboina ho 6 GB. Ary izany rehetra izany dia tohanan'ny a Bateria 3.300 mAh.
Hampiditra ny bixby mpanampy virtoaly ary ny fanombohana azy dia hitranga somary tara noho ny nantenaina, amin'ny volana septambra, miaraka amin'ny tanjona lehibe hijoroana ilay maodely iPhone vaovao, izay havoaka ihany koa amin'ireo daty ireo, ka izany no antony ny vidiny dia 999 euro, ka manome azy ireo faratampon'ilay fitaovana premium.
Mazava ho azy, tsy misy ofisialy ireo, na izany aza, ny firaketana ny fahombiazan'i Blass dia manasa antsika handray ny fampahalalana ho zava-dehibe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Nanambara ny antsipiriany voalohany amin'ny Samsung Galaxy Note 8
Araraoty ny varotra Steam sy ny torohevitra mba tsy ho faty raha manandrana